Faly ireo mpankafy Rooh Afza any India rehefa niverina hita teny amin’ny toeram-pivarotana nandritra ny fotoanan’ny Ramadany ity zava-pisotro ity · Global Voices teny Malagasy
Niverina rehefa nanjavona enimbolana ilay reharehan'ny firenena nandritra ny 113 taona
Voadika ny 04 Jona 2019 4:07 GMT
Ny zava-pisotro Rooh Afza (Lal sharbat). Sary avy amin'i Miansari66 tao amin'ny Wikipedia. Sehatra ho an'ny daholobe.
Raha nanomboka ny Ramadany ny mpanaraka ny finoana Islamo tamin'ity volana Mey ity dia maro ireo sakafo sy zava-pisotro ankafizina izay hohanin'ireo Miozolomana ao amin'ny zana-kaontinanta Indiana no nalaza. Ny zava-pisotro marihitra antsoina hoe Rooh Afza (Mamoha ny Fanahy) no iray amin'ireo zava-pisotro mahazatra any an-tokantranon'ny Miozolomana maro ao amin'ity faritra ity. Na izany aza, niatrika krizinà Rooh Afza izay tsy mbola fahita teo aloha ireo mpankafy izany tao India raha nanakaiky ny Ramadany tamin'ity taona ity- tsy hita teny amin'ny fivarotana nandritra ny volana maromaro ary tsy nisy nanerana ny firenena ny zava-pisotro (novokarin'ny Laboratoara Hamdard ).
Tsy azo eritreretina ny Ramadany tsy misy Rooh Afza amin'ny Iftaar. Nitady izany nandritra ny 3 andro teny amin'ny fivarotana rehetra ny zanako 8 taona. Toa tsy nisy hatraiza hatraiza izany.
— 🇮🇳मैं भी चौकिदार सा🙏 (@pagal_panthi) May 8, 2019
Nitady Rooh Afza aho eran'ny tsena rehetra teo akaikin'ny tranoko nandritra ny fahavaratra ka hatramin'izao. Tsy mahita izahay na aiza na aiza. Nanomboka ny Ramadany, saingy tsy misy Rooh Afza hatramin'ny fiandohan'ny fahavaratra. Noho izany, aleo tsy atao ho zava-pisotro ho an'ny Miozolomana izany … fa zava-pisotro ho an'i India amin'ny fahavaratra izany.
Tantara an-jato taonany:
Namboarina avy amin'ny zavamaniry mba handresena ny hafanana, tamin'ny taona 1906 no namoronan'i Hakim Mohammed Kabiruddin ity zava-pisotro ity, dokotera amin'ny Unani, fitsaboana amin'ny alàlan'ny zavamaniry ao Ghaziabad, ao India Britanika, ary navoakan'i Hakeem Hafiz Abdul Majeed avy any Delhi Taloha, India.
Tamin'ny taona 1907, namoaka ny rano-panafody vita amin'ny zavamaniry tsy misy alikaola antsoina hoe ‘Rooh Afza’ (Mamoha ny Fanahy) i Hakeem Abdul Majeed hiadiana amin'ny ‘Loo’, rivotra mafana ao Delhi.
Vetivety dia lasa iray amin'ireo hanim-py malaza indrindra tao Delhi niaraka tamin'ny Nihari sy ny Bedami poori ny Rooh Afza.
Mazàna ampifandraisina amin'ny volan'ny Ramadany ny Rooh Afza, izay matetika sotroina mandritra ny iftar (mamarana ny fifadian-kanina). Amidy eny an-tsena toy ny zava-pisotro hanomezana hanitra ny sherbets, ronono mangatsiaka, rano mangatsiaka, ary tsindrin-tsakafo mangatsiaka izy io. Manodidina ny tavoahangy miisa 20 tapitrisa no vokarina isan-taona ao India fotsiny.
Mba hanalana hetaheta!
Taorian'ny fizarazaran'i India mandraka ankehitriny, ny orinasa naorin'i Hakeem Hafiz Abdul Majeed sy ny zanany lahy no namokatra ny Rooh Afza izay niely nanerana India, Pakistan, ary Bangladesh.
Nanoratra tao amin'ny LiveMint i Mayank Austen Sufi:
Manana tsiro mitovy amin'ny ao Indiana ny Rooh Afza ao Pakistana izay mamaritra ny tenany ho toy ny “zava-pisotro ho an'ny fahavaratra any Antsinanana”. Nafindra tany amin'ny mpandraharaha iray tao an-toerana ny orinasa tao Dhaka taorian'ny niovan'i Pakistana Atsinanana ho Bangladesh tamin'ny 1971 izay nitondra ny lova nanomboka tao Lal Kuan ao Old Delhi.
Ny fifandirana ankehitriny
Voalaza fa mandalo olana ara-pitantanana izay nahatonga ny krizy tamin'ny tsy fisian'ny Rooh Afza Indiana ny orinasa. Nanoratra tao amin'ny gazety an-tserasera Print.in i Shivam VJ :
Momba ny sezan'i Mutawalli (mitovy amin'ny Tale Jeneraly) ao Hamdard no nahatonga ny fifandirana, izay eo ambany fitantanan'i Abdul Majeed ankehitriny, ilay zafindohalik'i Hakeem Hafiz Abdul Majeed, ilay mpitsabo Unani izay nanorina ny orinasa tao Delhi taloha zato taona lasa izay. Manana marika nentim-paharazana ara-pitsaboana toy ny Safi, Cinkara, Masturin ary Joshina ihany koa ny orinasa .
Ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Abdul Majeed, Hammad Ahmed no mikasa hitantana ny orinasa, izay mitaky ny lovany. Nitory tany amin'ny fitsarana mihitsy aza izy noho izany, ary ny ady ara-pitsarana no nampiato ny famokarana ny RoohAfza .
Nisarika ny fifantohana bebe kokoa ny tsy fisian'ny Rooh Afza rehefa nanolotra ny hamatsiana Rooh Afza ho an'i India nandritra ny vanim-potoanan'ny Ramadany ny Laboratoara Hamdard ao Pakistana.
Nisioka i Usama Qureshi, dokotera ara-pitsaboana, sady Tale Jeneraly ao Hamdard Pakistana hoe:
Ry rahalahy @DilliDurAst, afaka mamatsy Rooh Afza sy Rooh Afza GO ho an'i India izahay mandritra ity Ramadany ity. Afaka mandefa kamiao any amin'ny sisintanin'i Wahga izahay raha mamela izany ny governemanta Indiana.
Nandà ny tatitra i Hamdard:
Nandà ny tatitra nataon'ny fampitam-baovao momba ny fifandirana amin'ny fitantanana ny orinasa kosa ny Laboratoara Hamdard any India ary nanambara ny tsy fisian'ny akora ho antony tsy fisian'ny vokatra. Araka ny tatitra farany, nilaza ilay orinasa fa efa niverina indray ny vokatra.
Nilaza ny laboratoara mpanamboatra ny Rooh Afza Hamdard India fa efa niverina eny an-tsena ny zava-pisotro malaza vokariny taorian'ny tsy fisian'izany fotoana fohy noho ny tsy fisian'ny akoran-javamaniry sasany.
Ary faly tamin'ilay fiverenana ny vahoaka:
113 yrs old देश की शान , हमदर्द वालो का सबसे popular शर्बत #RoohAfza is Back after 6 months…cheers 🍹🍹 pic.twitter.com/4yJ4iFjVU7
Reharehan'ny firenena nandritra ny 113 taona , niverina indray enim-bolana taoriana ilay zava-pisotro malaza indrindra vita avy amin'ny zavamaniry ao Hamdard RoohAfza … mankalaza🍹🍹